Ntupu agbadoro, welded waya ntupu, igwe anaghị agba nchara - Yuze
Igwe anaghị agba nchara Square Woven ntupu
Igwe anaghị agba nchara Dutch waya ntupu
Igwe anaghị agba nchara Ise Heddle Weave Mesh
Igwe anaghị agba nchara kpara akpa ntupu
Igwe anaghị agba nchara welded waya
Igwe anaghị agba nchara Fine Waya
Waya igwe anaghị agba nchara(Ntupu Weaving)
Waya igwe anaghị agba nchara (Mgbakwunye Hose na-agbanwe agbanwe)
Waya igwe anaghị agba nchara (ụdọ waya)
Ntupu eriri galvanized na waya waya
Ọla kọpa, Brass & Bronze waya ntupu
Ngwa na-edozi ngwaahịa ndị ọzọ
Disiki igwe anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo ductility, ike tensile dị elu ma na-adịru ogologo oge iji, mgbanwe dị elu, nguzogide abrasion na nguzogide corrosion, dayameta uwe, elu dị larịị, agba na-egbuke egbuke, ect. Igwe anaghị agba nchara (Mesh Weaving) Parameters: Waya dayameta: φ0.10-φ4.00 mm ọkwa ihe: 304, 304L, 316, 316L, 201, 202, 301, 302, wdg Standard: ASTM, GB, DIN,JIS Ike tensile: 600N / mm2-800N / mm2 Ngwa: 70% nke Yuze igwe anaghị agba nchara hydrogen annealing waya na-akasị etinyere na mes ...
Atụmatụ: igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo ductility, ike tensile dị elu ma na-adịru ogologo oge n'iji ya eme ihe, mgbanwe dị elu, nguzogide abrasion na nguzogide corrosion, dayameta uwe, elu dị larịị, agba na-egbuke egbuke, ect. Igwe anaghị agba nchara waya Parameters: waya dayameta: φ0.10-φ4.00 mm ihe ọkwa: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, wdg Standard: ASTM, GB, DIN, JIS Tensile ike: 600N /mm2-800N/mm2 Ngwa igwe anaghị agba nchara: Yuze igwe anaghị agba nchara hydrogen annealing waya na-eji dị ka mgbanwe ...
A na-eji nchara igwe anaghị agba nchara n'ọtụtụ ebe na kemịkalụ, petrochemical na nyocha mmanụ, njem, ụlọ ọrụ nuklia, ike, textile, aerospace, eletrọnịkị, akwụkwọ ọgwụ nri na mpaghara ụlọ ọrụ ndị ọzọ, n'akụkụ ụfọdụ ma ọ bụ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ọla edochiri anya dị mkpa. Na mgbakwunye, sub-mesh sta-nless steel na ihe ịchọ mma ma dị mfe ihicha na akụrụngwa antbacterial, na mpaghara con-sumer ejirila ya mee ihe n'ọtụtụ ebe, dị ka ihe owuwu na ịchọ mma, kitc ...
Igwe anaghị agba nchara Square kpara ntupu na-agụnyekarị Plain /Twill Weave Mesh; sitere na 1mesh ruo 635mesh; "Mkpịsị aka ike" mkpuchi mkpuchi; Ntupu kpara akpa na ntupu welded. Plain/Twill Weave Mesh na”Tensile Bolt “ Bolting Cloth na-abụkarị maka ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. All Square mesh njikwa mma dabere na ASTM E 2016-15 Standard na akụrụngwa dabere na ọkọlọtọ ASTM A580-14. Raw material Grade: 304, 304L, 316, 316L, 430, etc. General eji na ngwa dị iche iche: · Nhazi...
Yuze na-arụpụta akwa waya omenala iji gboo mkpa nzacha ndị ahịa. Dutch weave filter mesh na-enye ike nzacha kachasị elu maka ọtụtụ ngwa, gụnyere nrụgide, mmanụ ọkụ na ihe nzacha mmiri maka ikuku ikuku, petrochemical, pharmaceutical, Ngwuputa na ụlọ ọrụ ọgwụgwọ mmiri mkpofu. Igwe anaghị agba nchara na-eguzogide okpomọkụ, acid, corrosion na eyi. N'ihi njirimara ndị a, a na-eji nchara igwe anaghị agba nchara n'ọtụtụ ebe na Ngwuputa, kemịkalụ, nri, mmanụ ala, ọgwụ, wdg, ...
Igwe anaghị agba nchara Five Heddle Weave Mesh na-enye oghere akụkụ anọ. Nhazi pụrụ iche nke ntupu a nwere ike inyere aka ịba ụba mmiri na mmiri na-asọpụta. Ntupu a nwekwara elu dị larịị n'otu akụkụ, nke a na-ejikarị eme ihe na nzacha nke ụlọ ọrụ kemịkalụ mmanụ, n'ụdị nzacha rịbọn na ihe nzacha. Igwe anaghị agba nchara Five Heddle Weave Mesh Features 1. Na-enye oghere akụkụ anọ 2. Ọbara mmiri na-eme ka ọ dị mma na njiri na-asọpụta 3. Na-enye elu dị larịị maka iwepụ nzacha n'ụzọ dị mfe ...
A na-eme igwe anaghị agba nchara nchara nchara n'ụdị dị iche iche site na igwe ntupu crimping, ụdị ngwaahịa waya zuru ụwa ọnụ nwere oghere square ma ọ bụ akụkụ anọ. Igwe anaghị agba nchara crimped waya ntupu nwekwara ike mara dị ka ígwè crimped ntupu, igwe anaghị agba nchara crimped ntupu, ojii crimped ntupu dị iche iche ihe. Yuze na-enyekarị igwe anaghị agba nchara crimped waya ntupu ihe: 302,304,304L,316,316L atụmatụ: Ọdịdị siri ike na inogide Crimped style: igwe anaghị agba nchara Crimped ...
Igwe anaghị agba nchara welded Wire Mesh na-emepụta site na platoon ịgbado ọkụ. Igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu na-welded na elu àgwà obere carbon ígwè waya wee passivated na plasticized site oyi plating, na-ekpo ọkụ plating na PVC mkpuchi. Igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu bụ nke elu àgwà igwe anaghị agba nchara waya. Ọ bụ ihe na-egosi acid ọzọ, alkali na-eguzogide ọgwụ, welded siri ike, mara mma na ọtụtụ ebe. Igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu nkọwa: igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu Njirimara: magburu onwe co...
YUZE WIRE MESH CO., LTD bụ ọkachamara igwe anaghị agba nchara & waya ntupu emeputa na Anping, China kemgbe 1986. Anyị kwa afọ mmepụta uru bụ n'elu 40 nde USD; A na-ebupụ 80% nke ngwaahịa na mba na mpaghara 30.
Anyị nwere ụlọ mmepụta ihe atọ na alaka ụlọ ọrụ 1; nke nwere ihe karịrị mkpara 200: Otu ụlọ ọrụ igwe anaghị agba nchara waya; Otu ụlọ ọrụ ihe osise igwe anaghị agba nchara; Otu ụlọ ọrụ na-akpa ákwà ntupu; Otu Alaka ụlọ ọrụ dị na Shijiazhuang.
Yuze nwetara ISO àgwà usoro: GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015 nke bụ isi ndabere nke procument omume , mmepụta usoro na àgwà njikwa.
Yuze nwere ụlọ ọrụ atọ na otu alaka ụlọ ọrụ, yana ihe karịrị ndị ọrụ 200
Ụlọ ọrụ Yuze malitere site na afọ 1986 na azụmahịa mbupụ malitere kemgbe afọ 2005
Yuze nwetara aha dị elu site na ndị ahịa esenidụt na ndị ahịa ụlọ, anyị na-ahụ na anyị ga-enye ndị mmekọ azụmahịa anyị ọrụ kacha mma na ngwaahịa asọmpi.
Igwe spooling ọhụrụ n'ịntanetị
Na nso nso a, a ọhụrụ set nke spooling igwe na- commissioning eze tinye n'ime mmepụta na Yuze company.The igwe nwere ike iji PL,PT na NP usoro spools ụdị, na n'ihu ime ka anyị nkwakọ. Ugbu a, anyị nwere ike ịnye nkwakọ ngwaahịa spools dị ka ndị a: Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla ma ọ bụ ...
Ebe nchekwa nke igwe anaghị agba nchara dị mkpa
Ntupu igwe anaghị agba nchara bụ ụdị waya nchara na-eguzogide corrosion, nke na-enweghị nchara kpamkpam, yana arụrụ arụ ya na mgbasa ozi kemịkalụ anaghị akwụsi ike. A na-emetụta nguzogide corrosion nke igwe anaghị agba nchara nchara site na kemịkalụ ya dị ka nickel, chromium, cop ...
Nabata unu niile ka unu leta Yuze
Mgbe m na-enyocha foto nke nleta ndị ahịa, echetara m ndị ahịa Korea na ndị Australia gara leta ụlọ ahịa ọrụ anyị ma mee mkparịta ụka ọzọ na ọnụ ụlọ nzukọ anyị. Ọ bụ ihe ncheta dị mma na ndị ọbịa niile na ndị ikwu ụlọ ọrụ na-ekere òkè na mkparịta ụka na ọ ga-abụ. ezigbo ọrụ ịghọta...
Ihe ngosi Turkey
Ọ bụ ụzọ nkwalite dị mma mgbe ndị ahịa na-ahụ anyị na ihe ngosi ụfọdụ, karịsịa ụfọdụ ihe ngosi ọkachamara ,nke ndị ikwu na ngwaahịa na ngwaahịa ngwa ngwa.We ama abuana 4 ngosi na ikpeazụ 2 years.Our sales ngalaba nwere nnọọ omimi nghọta banyere ...
Adreesị ụlọ ọrụ Yuze:
Adreesị ụlọ ọrụ Alaka Yuze:
Ụlọ ụlọ ọrụ Tower B.Wanda, Shijiazhuang City, Hebei Province, China
igwe anaghị agba nchara kpara ntupu, 20mesh igwe anaghị agba nchara waya ntupu filter diski, Igwe anaghị agba nchara nchara nzacha diski, waya, 316 igwe anaghị agba nchara waya ntupu filter, 316 igwe anaghị agba nchara,